“မေ့သွားလို့ပါ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “မေ့သွားလို့ပါ”
Posted by TTNU on Jul 13, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 37 comments
အရေးကြီးတဲ့ ချိန်းဆိုထားတာလေးတွေ မေ့ပြီးမသွားမိလို့ အဆင်မပြေတွေဖြစ်ဖူးပါသလား။
ထမင်းအိုးတူးသွားလောက်အောင်မေ့ပြီး စကားတွေပြောနေမိပါသလား။ အိမ်သော့၊ ဆိုင်ကယ်
သော့၊ ကားသော့၊ ဘယ်ထားမိမှန်းမသိဖြစ်ပြီး ပွစာတက်နေအောင် ဟိုရှာဒီရှာ ဖြစ်ဖူးပါသ
လား။ ဘဏ်မှာငွေထုတ်ခါနီး မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လို့ မေးတော့မှ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ကိုယ်
စိတ်မပူပါနဲ့ မိတ်ဆွေ။ ရှင်တစ်ယောက်တည်းမေ့တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ တွေ
အားလုံး ရှုပ်မှုတွေပွေနေတဲ့ (၂၁)ရာစုမှာ အရာရာကို ချက်ချင်းမှတ်မိသတိရဖို့ ပို၍ပို၍
ဟိုးတုန်းကတော့ သတိမေ့ရော့တတ်တာကို အသက်ကြီးလာလို့ ပါ ဆိုတာလေးနဲ့ အပြစ်
ဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ ပညာရှင်များအပြောအရ မေ့တတ်လာကြခြင်းဟာ
ခေတ်မီ နေမှုထိုင်မှု ပုံစံတွေကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။ နောင်ဆိုရင် မေ့တတ်တဲ့ မျိုးဆက်တစ်ခု
“The forgetful generation” ရယ်လို့ ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်မတို့ရဲ့  မှတ်ဥာဏ်တွေက
လည်း ဝန်ပိမှတ်ဥာဏ်တွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ မှန်းဆလာကြပါတယ်။
ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေ အကြောင်း… မေ့တတ်လာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအကြောင်း၊ ကျွန်မအကြောင်း
ပြောပြရဦးမယ်။ ( အမည်တွေပြောင်းထားပါတယ်)။
သူကရန်ကုန်ကပါ။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးပြီ။ အလုပ်ဝင်နေပြီ။ အတော် အလုပ်များတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု
များတဲ့ ရုံးတစ်ရုံးမှာပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ရုံးသွားဖို့ ဘတ်စ်ကားစီးသွားတယ်။ သူုတက်ခဲ့တဲ့
တက္ကသိုလ်မှာဆင်းပြီး လက်ချာဟောထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီး ငါနဲ့သိတဲ့လူတွေမရှိပါလားလို့တွေးမိသ
တဲ့။ ပြီးမှ ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်တယ် “ ဟာ ငါကျောင်းသားမဟုတ်တော့ဘူးပဲ။ ရုံးသွားရမှာ
ပါလား” ဆိုပြီးရုံးကိုပြေးရတော့တာတဲ့။ အဲဒီနေ့က အလုပ်(၂)နာရီလောက်နောက်ကျသွား
သူက ကျောက်ဆည်မှာအလုပ်ဝင်နေတာ။ သင်္ကြန်တွင်းပိတ်ရက် မန္တလေးပြန်လာတာ လမ်း
မှာ မြစ်ငယ်ရောက်တော့ ကားဆရာကို ဆင်းမယ်ပြောပြီး သူ့ အိပ်ကလေးဆွဲပြီး ဆင်းသွား
လိုက်တာ ကားလည်းအတော်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ သူ ကိုယ်သူ မန္တလေးထိစီးရမှာ သတိရသတဲ့။ ဒီတော့နောက်ကားထပ်စောင့်ရတော့တာပေါ့ ။ သူမေ့တတ်တာက
ထူးဆန်းနေတယ်လား။ အော်ဒီလိုလေ.. သူတို့မိသားစု အရင်ကမြစ်ငယ်မှာနေတာလေ။
သူက ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲစားကြီးပါ။ အမြဲတမ်းရယ်မောနေတာ။ စိတ်ဖိစီးမှု ဘာမှ
မရှိတဲ့ ပုံစံပါ။ အခုတစ်လော ပဲဈေး၊ဆီဈေးတွေ ပွဲကြမ်းနေတော့ သူ သိပ်မရယ်နှိုင်ဘူး။
တစ်ရက်မှာ ပွဲရုံသွားဖို့ ရေမိုးချိုးဝတ်စားပြီး ထွက်လာလိုက်တာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ နှစ်ပြလောက်
စီးလာပြီးမှ ရေချိုးခန်းစီးတဲ့ဖိနပ်ကြီးမလဲခဲ့ရလို့ အိမ်ပြန်လာရသတဲ့။
သူကကျွန်မမောင်ပါ။ လာရှိုးကနေရထားနဲ့ပြန်လာတော့ နောင်ပိန်ဘူတာမှာ ထမင်းစားတယ်။
လူတစ်ယောက်လာနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့။ ရှေ့ ဖြစ်နောက်ကြောင်းတွေပြောနေတော့လည်း
သိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဆိုတာ သေချာတယ်ပေါ့လေ။ အိုးသည်ကုန်းမှာသိခဲ့တာဆိုတာ
လည်းပြောစကားတွေ အရ မှန်းလို့ရနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူ့ နာမည် အစဖော်မရဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့
ရထားထွက်တော့မယ် ရထားပေါ်တွဲခိုရပ်ရင်း နှုတ်ဆက်တယ်။ ဒီလူကလည်း ပြန်နှုတ်ဆက်
တယ်၊ “ဟေး အိုးသည်ကုန်းက ဖိုးသာအောင်တို့နဲ့တွေ့သေးလား” တဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်မမောင်
လေးက .. “ဖိုးသာအောင်က ငါလေကွာ” လို့ သူ့ရင်ဘတ်ပုတ်ပြပြီးအော်ပြောလိုက်ရင်းနဲ့
ရထားကြီးကလည်း ထွက်နေပြီဆိုတော့ လက်ပဲပြလိုက်ရတော့တယ်တဲ့။
ပြောရင်းတန်းလန်းစကားတွေမေ့သွားလို့ ဝါကျပြန်စီရတာအကြိမ်ကြိမ်၊ ကျောင်းသားများစွာ
တို့ရဲ့ နာမည်တွေကို မေ့တယ်၊ ရောခေါ်တယ်။ သူတို့နာမည်လေးတွေကလည်း အတော်ရှည်
သားနော်။ ယောင်္ကျားလေး၊မိန်ကလေးနာမည်တွေက ခပ်ဆင်ဆင်တွေရယ်လေ။ ဥပမာ..
မြတ်နိုးဦး၊ ဆုမြတ်နိုး၊ မြတ်နိုးကိုကို၊ အိမ့်မြတ်နိုး၊ မြတ်နိုးလွန်း၊ မြတ်နိုးမောင်… အားလုံးမှတ်မိဖို့ အတော်အားယူရပါတယ်။ အိန္ဒြာ၊ အိနြေ္ဒ ၊ ဝသုန်၊ ဝသန်တွေလည်း
ရှုပ်လို့ပါပဲ။ အေးမင်းသူဆိုတဲ့ ကျောင်းသားကို အေးမြတ်သူလို့ ခဏခဏမှားခေါ်မိပါတယ်။
အင်း…ကျွန်မတို့ ရှေးတုန်းကလို မလှ၊ မမြ၊ မတင်၊ မနု၊ အပု စသဖြင့်တွေကမှ
ကဲ နာမည်တွေမေ့တာကတော့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခုသုံးထားပါတယ်။ကဒ်ပြားတစ်ခု
ပေါ်မှာ နာမည်တွေ တန်းစီရေးထားပြီး စာရင်းကြည့်ခေါ်ရတော့တာပေါ့။ အမေပြော
ဖူးတာကတော့ မှတ်မိအောင် လက်ကို ကြိုးလေးချည်နှောင်ထားရသတဲ့။ နည်းနည်းလည်း
ကြာရော “ငါလက်ကချည်ထားတဲ့ ကြိုးက ဘာအတွက်ပါလိမ့်” လို့ မေ့ပြန်ရောတဲ့။
မေ့မှာစိုးလို့ ကြိုးချည်ပြီးမှတ်၊ ထပ်မေ့ပြီးဘာကြိုးပါလိမ့်လို့စဉ်းစား။
အော..မေ့တော့မလို့၊ တစ်ခုပြောပြစရာရှိသေးတယ်။ ကျွန်မဆီမှာ အမွှာ ကျောင်းသား တွေရှိသေးတယ်။ တူတာမှ ခွဲကိုမခွဲတတ်ရတဲ့အထဲ သွားလေးတွေမှာ မကျဲအောင်ကွပ်တဲ့
အကွပ်ပါတူနေသေးတယ်။ ကံအားလျော်စွာပဲ အမွှာငယ်က လက်မှာ အဝတ်ကြိုးထိုးလက်
ကောက်လေးဝတ်ထားတော့ စာမေးခါနီး အဲဒီ လက်ကလေးလိုက်ကြည့်ရတယ်လေ။
နောက်တစ်မွှာကတော့ တစ်ယောက်မှာမှည့်သေးသေးလေးပါတယ်။ အဲဒါ ကျွန်မ လက်ကိုင်
ထားတဲ့ (အမည်မမေ့ရေး ကဒ်ပြား)ပေါ်မှာ ပုံလေးဆွဲထားရပါတယ်။
အသက်ကြီးမှမေ့တတ်တာပိုလာသလိုပါပဲ။ သူများတွေတင်ထားတဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေ၊
အသီးလှလှလေးတွေ ကြိုက်လို့ ကူးပြီး ဖိုလ်ဒါနဲ့သိမ်းပါတယ်။ အမည်ရေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီပန်းငါသိပါတယ်။ဘာပန်းပါလိမ့်လို့ နှစ်ရက်သုံးရက်စဉ်းစားယူရပါတယ်။
စဉ်းစားလို့မှ မရရင် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သူများကို ဒုက္ခလိုက်ပေးပြီးမေးရပါတယ်။
ဟုတ်ပါပြီ။ ရေးလို့မဆုံးတော့ပါဘူး။ ဂဇက်မှာစာရေးဖို့ log in လုပ်ရတဲ့ Pass Word မမှတ်မိ
တာတော့ အားလုံးခွင့်လွှတ်ကြမှာပါ။ တယ်ရှည်သကိုး။ တပည့်လေးတစ်ယောက်ကတော့
ပြောတယ်၊ တီချာကြီး ကိုယ် Pass Word ကိုယ်ပြင်လို့ရတယ်တဲ့။ တော်ပါပြီကွာ။
ငါ့မှတ်ဥာဏ် ငါစစ်ရတာပေါ့ လို့ပြောပြီး log in လုပ်တိုင်း ပြန်ကြည့်ရတာပါပဲ။
ဒါထက် ဂဇက်ရွာသူကြီး ဘယ်သူ???။ အော် ကိုခိုင် ။
တစ်ခါတစ်လေ “လုပ်ကြပါဦးဟ။ ငါ Alzheimer ရနေပြီလား” လို့ အနားရှိသူတွေကို
ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ ပြောသာပြောရတာပါ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ခရေစေ့တွင်းကျ မှတ်မိချင်လည်းမှတ်မိနေတော့တာပါပဲ။
တည့်တာတွေတည့်၊ စောင်းတာတွေစောင်း၊ ဗြောင်းဆန်နေလေရဲ့ ။
ပြင်မလားစိတ်ကူးပေမဲ့ မနက် ဂရမ်မာ အတန်းသစ်ရှိတယ်။
ဒီည မိုးချုပ်လို့မရဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့
တီတီနု ဆိုတာ လမ်းထိပ်ကွမ်းယာဆိုင်က အဒေါ်ကြီး
ဘယ်လိုလုပ် ရွာထဲမှာ တွေ့ နေရတာလဲ
မေ့တွားလို့ .မေ့တွားလို့ ..
ကွမ်းယာသည် ဒေါ်သန်းနုက အီးမှ မကျွမ်းပဲ..
ဒီ…ဒေါ်သန်းနုက အင်္ဂလိပ်စာ ဖရီးသင်ပေးတဲ့ ဆြာမကြီးပဲကိုးဗျ
တီချယ်ကြီးကို အကြွေး တစ်သိန်းဆပ်ရမှာ မေ့နေလို့ ..
ကျော်လဲ မေ့တတ်လို့ ပါ.
အင်္ဂလ်ိပ်လို ဘိုခေါ်လဲဟင်.. :?
ပထမဆုယူပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် The very first reader ရယ်။
မေ့တတ်တာ forgetful, absent-minded စသဖြင့်ခေါ်ပါတယ်။
မေ့တတ်တဲ့သူကို ချစ်စနိုးနဲ့ အမည်ပြောင် Forgetful Jones လို့
သတိရရင် ကြွေးပြန်ဆပ်ပါနော်။ လက်ကိုကြိုးချည်ပေးထားရမလား။
မေ့လို့မဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို
တနေ့ ကျမတို့ အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ရှေ့က၊ဘကြီးကိုဖြစ်စဉ်လေးသွားပြောပြမိခဲ့ပါတယ်။
လက်တဖက်နဲ့ ပိတ်လို့ ရတဲ့ဗွန်တံလေးကိုမပါတယ်၊ပြီးရင်ဂျက်ပြန်ကျသွားအောင်
အန်တီအေးရေ………… နည်းလမ်းကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ အလေ့အကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်။
ကျနော်သူငယ်ချင်းကတော့ သူမိန်းမကို ဈေးပို့ထားခဲ့ပြီး ပြန်ကြိုဘို့မေ့နေသတဲ့။
တစ်ယောက်ကတော့ ထူးဆန်းတယ် သူ့ဆီကပိုက်ဆံချေးမိရင် ဆပ်ပြီးတာကို
ကျနော်လဲ ဘယ်အချိန်မှာ အမေ့တွေစမလဲလို့ ရင်မောမောနဲ့စောင့်နေပါ၏
လေးပေါက်ချင့် သူများတွေကို မေ့ချင်မေ့ပါ
ဆရာမကြီး ဒီထက်မက အသက်ရှည်ပါစေ
” ဒါထက် ဂဇက်ရွာသူကြီး ဘယ်သူ ??? ။ အော် ကိုခိုင် ။
ဒီလူက ဘာပြုလို့များ ဒီဝင်ခွင့်နံပါတ်ကို အရှည်ကြီးလုပ်ထားပါလိမ့်လို့
တီချယ်နုရယ် ၊ အဘလဲ နားမလည်တော့ပါဘူး ။
ဒီ ဂဇက် ဝင်ခွင့်နံပါတ်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးလား ။
အဘ လည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူးကွယ် ။
ညဏ်ကောင်း၊ (ကောင်း – cow – နွား)
တီချယ်ကြီးရှင့်………………. မေ့တတ်တာကတော့ အသက်ကြီးမှမေ့တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အသက်ငယ်တဲ့လူတွေလည်း မေ့တတ်တယ်ဆိုတာကို အပြည့်အ၀လက်ခံပါတယ်ရှင့်။ ငြိမ်းဆို ခဏခဏ မေ့တတ်လို့ပါ။
မေမေက တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကို အိမ်ရှေ့မှာပြောလိုက်တယ်။ အိမ်နောက်ဖေးရောက်သွားရင် ဘာပြောလိုက်မှန်းမသိလို့ ပြန်ပြန်မေးရပါတယ်။
တတိယနှစ် စာမေးပွဲဖြေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပေါ့ စာမေးပွဲပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းမစားသေးဘဲ အရင်အိပ်ပါတယ်။ အမှန်ဆို အဲဒီ့နေ့က စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ပါ။ အဲဒါကို အိပ်ရာက နိုးတော့ စာတွေပြန်ကျက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီစာတွေကို စာမေးပွဲမှာဖြေဖူးသလိုပဲဆိုပြီး စားပွဲရှေ့က စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်၊ ပြက္ခဒိန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက် လုပ်ပြီးမှ စာမေးပွဲပြီးနေပြီမှန်း သတိရလိုက်တဲ့အဖြစ်ပါ။ အဲဒီ့လိုမျိုး မေ့ပြီး လွဲတာတွေလည်း ခဏခဏပါပဲ။ မေမေကတော့ ပြောတယ်။ အဲလိုမေ့တတ်တာ သေချာဂရုမစိုက်လို့တဲ့ ဆိုပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ရဟန်းတို့ သင်တို့အား ယခု ( ငါဘုရား ) မိန့်မှာတော်မူခဲ့အံ့ ပြုပြင်ပေးရသော ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရတရားတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ မမေ့သောသတိတရားဖြင့် ကိစ္စပြီးအောင် အားထုတ်ကြကုန်လော။
လို့တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်က ပရိတ်နိဗ္ဗာန်မပြုမီ အကျဉ်းခြုံးပြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့ဒါဘဲ
တစ်ချို့မေ့တတ်တာတွေကတော့ အလေ့အကျင့်နဲ့ ဆိုင်မလားဘဲ
ပြဿနာက တစ်အိမ်အိမ်ကိုသွားလို့ ပြန်လာတဲ့အခါကြရင် ဖိနပ်ပြန်ပါမလာဘူး
ဝန်ကြီးတစ်ယောက်လားဘာလား အရက်ဆိုင်မှာ ကလေးမေ့ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေး
တစ်နေ့မှာပေါ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမခိုးလာပါသတဲ့ သူခိုးလာတဲ့ မိန်းမကလည်း
ဝတ်ပြုဆုတောင်းတွေပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်အိမ်ကိုယ်အသီးသီးပြန်ကြပါလေရော
တစ်ယောက်က မိန်းမခိုးခဲ့တာ မိန်းမမေ့ကျန်ခဲ့တယ်
တစ်ယောက်ကလည်း လင်နောက်လိုက်သွားတာ လင်ကိုမေ့ကျန်ခဲ့တယ်
သြော် အဲ့ဒါက ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ကြည့်မိပြီးမှ
ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်းကို အခြားနေရာမှာသုံးရင်
(မမေ့ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာမေ့လို့မဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာ)
ဆိုတော့… မေ့ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့
မေ့ပစ်လိုက်လို့ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ
ကလေးတွေ နာမည်မေ့တဲ့ကိစ္စ ကိုတော့
အော်မေ့ပြန်ပြီ၊ မအေးကေရေ Best Comment ရွေးမယ်နော်။
(ကျနော်လဲ ဘယ်အချိန်မှာ အမေ့တွေစမလဲလို့ ရင်မောမောနဲ့စောင့်နေပါ၏)
မစောင့်နဲ့၊ သွားနှင့်။ နောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်။
MG ဝင်လိုက်တော့ mail ကနေ PW ပို့ပေးတာလေကွာ။
တီချာမေ့တတ်ပေမဲ့ ဒါကိုမှတ်မိတယ်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့
တီချာ့PWကဖွင့်မရလို့ admin ကို ထပ်မေးခဲ့ဖူးလို့။
ကျမကတော့ ဘာမှ မှတ်မှတ်ရရ မလုပ်တတ်ဘူး။
သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ မွေးနေ့တွေ အမှတ်တရနေ့တွေ ဘာမှ မမှတ်မိဘူး။
ပစ္စည်းတခုကို ကိုင်ပြီး ချချင်တဲ့နေရာချမိ၊ ပြီးမှ ပြောင်းဆန်အောင်ပြန်ရှာ။ [:(]
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်မေ့လျော့မှုကနေ တန်းဖိုးတွေ အများကြီး ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေတော့ သတိထားလုပ်ရင်းကနေ အရေးကြီးတာဆို မမေ့တော့ဘူး။
ကျန်တာတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ [;)]
သိသလောက်လေး ဝင်ဖောလိုက်အုံးမှ ဟိဟိ
မေ့လျှော့တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို လွှတ်ထားတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသိ သတိတရား ကို သေချာအာရုံစိုက်ပီး သတိတရားလက်ကိုင်ထားရင် မေ့တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်လို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပါပဲ ၊ စိတ်ကသာ အရေးကြီးတာပါ ၊ သတိမလွတ်ပါစေနှင့် ။
မုန်းမုန်းမေ့မေ့ မုန်းမေ့ပြီးလားလို့မေးချင်တယ် ……….
မင်္ဂလာပါဆရာမ သမီးကိုမှတ်မိလားဆရာမ …….
မေ့တတ်တာသမီးလည်းပါပါတယ် ဆရာမ သမီးလေ အခုဆို သမီးငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေကိုတွေ့ရင် နံမည်မမှတ်မိတော့ဘူး …….. တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ အဲဒီနေရာသွားတယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမမှတ်မိတော့ဘူး အဲဒါပထမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာကို ပြန်သွားမှမှတ်မိတော့တယ် ……….
ဆရာမနံမည်တွေမေ့တာသူငယ်ချင်းနံမည်တွေမေ့တာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံအလုပ် တစ်ခုလုပ်မယ် ပစ္စည်းတစ်ခုထားပြီးမေ့တာကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီအလုပ်ပေါ်စိတ်မရှိပဲ တစ်ခြားနေရာ ကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဆိုတာတော့အသေအချာပါပဲ …….
မပြုတ် … ဒီမသုံးလုံးလုပ်ကြည့်မယ်။
သိပ်အဓိပ္ပါယ်ရှိတာနော်။ ကျွန်မတို့တွေ ဒီပါရမီလေးမနည်းပြည့်အောင်
အားထုတ်နေရတာ။ မမေ့သောအသိ၊ သတိ စဉ်းစားသုံးသပ်ရင်းမေ့နေကြတာပါလား။
ကိုပုရေးတဲ့ စုံတွဲရဲ့ မေ့ချက်ကတော့ Guinness Record ဝင်လောက်ပါရဲ့ ။
သတိကောင်းတဲ့သူတွေက မေ့မေ့ရော့ရော့သူတွေကို အားမရကြဘူးလေ။
အလုပ်ထဲမှာဆိုရင် အစည်းအဝေးမှာ notes လိုက်မရေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို
အမြဲသတိပေးနေရပါတယ်။ Book & Pen System ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောလည်း
ချမရေးတော့ ဘာတွေ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဝန်ထမ်းငယ်တွေ
(အသိ သတိတရား ကို သေချာအာရုံစိုက်ပီး သတိတရားလက်ကိုင်ထားရင် မေ့တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်လို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပါပဲ ၊ စိတ်ကသာ အရေးကြီးတာပါ ၊ သတိမလွတ်ပါစေနှင့် ။)
အားရှိသွားပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးလို အားပေးတတ်လိုက်တာ။
တီချာသမီးကိုသိတယ်။ ရခိုင်အလှူပုံထဲမှာတွေ့လို့ ကူးထားတယ်။
တီချာတို့ခေတ်တုန်းကတော့ ဆရာ/မ တစ်ယောက်ကို (၃)ဘာသာလောက်သင်တာ
ဆိုတော့ စုစုပေါင်းမှ သုံးလေးယောက်ထဲကိုး။ အခုခေတ်မှာတော့ (၆)ဘာသာအတွက်
ကျောင်းကဆရာ/မ (၆)ယောက်။ ကျူရှင်က(၆)ယောက် ။ဂိုက်က(၆)ယောက် ပေင်း(၁၈)
pass word ဆိုလို့ မန်းဂဇက်ထဲ စ၀င်ကတည်းက သုံးလာခဲ့တဲ့
ကျွန်တော့်ရဲ့ pass word လေး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိ…။
၀င်လို့ မရတော့ ပါဘူးခင်ဗျာ…။
အဲဒါနဲ့ pass word အသစ်တစ်ခု ပြန်ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါတောင် ရွာသားညီငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကြောင့်
၄၀ ကျော်လာတော့ အရမ်းမေ့တတ်လာပါတယ် တီချယ်ကြီးရေ…။
ကားထဲမှာ သော့တန်းလန်းကျန်ကျန်နေလို့ ကုလားခေါ်ပြီး ဖွင့်ရတာလည်း
တစ်ခါတစ်လေ အမြဲတမ်းတတ်ထားရတဲ့ မျက်မှန်ကိုတောင်
မေ့ပြီး မတတ်ဖြစ်ဘဲ အိမ်အောက်ရောက်မှ အပေါ်ပြန်တက်ရတာလည်း ခဏခဏပါပဲ…။
ကျွန်တော်လည်းပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…။
တီချယ် ဘယ်သူ့ကိုမေ့မေ့ ဘာတွေကိုပဲ မေ့မေ့ အနော့်ကိုတော့ မေ့လို့မရဘူး မလား ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
တခါတလေတော့လဲ မေ့တတ်လွန်းသူတွေထဲ ကိုယ်လဲပါနေတယ် တီချယ်ရေ။
မေ့တဲ့အကြောင်းရေးတော့ ကျွန်တော့ကို တည့်တည့်မှန်တော့တာပဲ…
ကျွန်တော်ကတော့ မေ့တဲ့နေရာမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းသလောက်ပါ..။
လမ်းသွားရင်း သွားရမယ့်နေရာကိုမေ့ပြီး အိမ်ပြန်လာရတာလဲ ခဏခဏ..။
ဘတ်စ်ကားစီးရင်လဲ ဆင်းမယ့်နေရာကိုမေ့ရတာနဲ့ ၊ ဆင်းနေကျမှတ်တိုင်မှာ မေ့ပြီးဆင်းမိတာနဲ့
တခါတလေတော့ ထမင်းမစားရသေးတာကိုမေ့ပြီး နပ်ကျော်သွားတတ်တယ်..။
အဆိုးဆုံးကတော့ လူတွေကိုမေ့တာပဲ တီချာရေ-
အဲဒါနဲ့ပဲ မိတ်ပျက်ရပေါင်း၊ နာမည်ပျက်ရပေါင်းလဲ များပါပြီ..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်ထင်နေပြီး ၀မ်းသာနေမိတာ
တနေ့ကမှ မေ့သွားတဲ့လုပ်စရာတွေကို စုပြုံပြီး ပြန်သတိရသွားလို့
အခုတော့ .. ဒေါင်ချာကို စိုင်း… လို့…
ကျွန်မသေချာအောင်မေးတာပါ၊ စိတ်တော့ မရှိပါနဲ့နော်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုက်တစ်ခုမှာ အလင်းဆက်ဆိုတဲ့ profile name တစ်ခုတွေ့မိလို့
ကျွန်မတို့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဘဝချိုချိုခါးခါး ရသာစုံကြုံလာရလေတော့
တစ်ခါတစ်လေ မေ့ပစ်လိုက်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မေ့တတ်သွားတာလည်း ကျွန်မ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါရှင်။
တီချယ်ကြီးရယ် သမီးကတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မေ့တတ်တာလွန်ရောဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေတယ်.. ရာဟူးတို့ စကိုက်ပ်အကောင့်တွေလည်းမဖွင့်တာကြာရင် ပါ့စ်ဝေါ့မေ့.. အသိတယောက်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်နာမည်မေ့. စာအုပ်ထဲရေးမှတ်ထားလည်း ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပြန်မတွေ့..သော့ပျောက်လို့ဒေါင်းတောက် အောင်ရှာရတာလည်း မကြာခဏ… နောက် ၁၀နှစ်များဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး
တီချယ်ရေ ကျမလဲမေ့တတ်လွန်းပြီး အလုပ်ပါထိခိုက်တာကြောင့် လုပ်စရာရှိတဲ့အကုန်လုံး ဖုန်းနဲ့မှတ်ပြီး အလမ်းပေးထားရပါတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာဘာမှတ်ထားလဲအမြဲတမ်းပြန်စစ် မေ့သွားတေ့ာလဲ အလမ်းမြည်သံကြားရတော့သတိပြန်ရနဲ့ တချိန်လုံးအလမ်းမြည်သံဘဲကြားနေရတော့တာပါဘဲ။
တီချယ်ကြီး ခင်ဗျား …
ကျနော်လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး ..
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မေ့တတ်လိုက်တာလည်း လွန်ပါရော ..
ဒါကို မှတ်ဥာဏ် မကောင်းဘူးလို့ ပြောရမလားပဲဗျာ …
အရင်က အဲ့လောက် မမေ့တတ်ဘူးဗျ ..
ဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရသေးတယ် .. အဟီးးးးးး
ခု ခဏလေးနဲ့ မေ့မေ့သွားတတ်လို့ ..
တီချယ်ကြီး ပြောသလို လက်ကို ကြိုးချည်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ …
အဲဒါ တီချာပြောသလိုပဲ ခေတ်သစ်လူနေမှုဘဝကြောင့် ထင်ပါရဲ့ နော်။
ဘယ်သူ့ ကို စောင်းပြောတာပါလိမ့်။
နည်းပညာတွေကြောင့်မေ့တာကို နည်းပညာနဲ့ ပြန်သတိရစေတာပေါ့နော။
တီချယ်ကြီးတို့လို ငါးဆယ်ကျော် မပြောပါနဲ့
အနော်တို့လို နှစ်ဆယ်ကျော်လေးတွေတောင် မေ့တတ်တာကတော့ ခဏခဏပါပဲ
နာမယ် တွေကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ
ကိုဘဲဥ ပြောသလို အသိ သတိလေး ကပ်နေရင်တော့ အမေ့လျော့မယ်ထင်ပါတယ်
မေ့တတ်တာကို ကောင်းတဲ့ ဘက်က တွေးကြည့်ရင်
( မှန် မမှန်တော့ မသိဘူး ကိုယ့်ဘာသာတွေးကြည့်တာ)
ဥဏှောက်ဆိုတာလဲ ကွန်ပျူတာတွေ ရဲ့ မှတ်ညဏ်လို နေရာ အကန့်အသတ် ရှိမယ်ထင်တယ်
ကွန်ပျူတာ မှာက နေရာ မဆန့်တော့ရင် မလိုချင်တာကို ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်
လူ မှာက အဲဒီလို လုပ်လို့ မရဘူး
ဥပမာ နှစ် ငါးလီ တစ်ဆယ် ဆိုတာ မမှတ်ချင်တော့ဘူး မေ့လိုက်ချင်တာ ဆိုလဲ မရဘူး
မကြိုးစားဘဲ အလိုလို မှတ်မိနေတယ်
မေ့တတ်တာကတော့ ဥဏှောက်နေရာပို ထွက်လာအောင် သဘာဝက ခဏလေး ဖျက်ပေးထားတယ်လို့များ ပြောလို့ ရမလားလို့ပါ
တီချာတို့ အခုပြဿနာက မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေတာ။ သိသလိုလို
လက်ဖက်ရည်ကုန်တော့ မိန်းမကိုမေ့ပြီး အိမ်ပြန်လာတော့
သူ့မိန်းမက စိတ်ကောက်ပြီး ညစာငတ်သွားတယ်(ထမင်း)
ကျွန်တော်က… FACE BOOK မှာ… အလင်းဆက် လို့နာမည် ပေးပြီး…ရေးနေတာပါ။
တခြား..ဆိုက် ..မှာတော့ မရေးဖူးပါဘူး။
ဓမ္မနဒီ..ဆိုတဲ့ ..ဆိုက်နဲ့ တော့..အဆက်အဆံ..ရှီပါတယ် ။